Duck Duck Moose အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစား | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Duck Duck Moose အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစား
Duck Duck Moose APK ကိုအားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစား
Google Play ပေါ်တွင်ပေဘင်ဂိုကစားချွတ် 50% နှင့်အတူအားလပ်ရက်အခမ်းအနားကျင်းပ! ထို့အပြင်, အနုတ်, အမြှောက်နှင့်ဌာနခွဲသင့်ကလေး၏နားလည်မှုသူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူကြီးထွားစောင့်ကြည့်လာကြ! အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစားသင်္ချာများအတွက်အဖြစ်များသည့် Core ပြည်နယ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အတူ aligned ကြောင်းစတုတ္ထအဆင့်တဆင့်သူငယ်တန်းများအတွက်အပျော်အပျက်ကစားပွဲဖြစ်ပါသည်။ အသက် 5-10
ကလေးများအမြင်အာရုံကိုသင်ယူနှင့်အလေ့အကျင့်များအပြင်, အနုတ်, အမြှောက်နှင့်ဌာနခွဲမည်! အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစားဆရာများကလေးတွေကွဲပြားခြားနားသောသင်္ချာသဘောတရားနားလည်ကူညီရန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီထူးခြားတဲ့ပညာရေးအရိပ်အမြွက်ပါဝင်သည်။ နေဆဲပျော်စရာရှိခြင်းနေချိန်မှာသူတို့အယူအဆနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးချင်းစီသည်ဆိတ်သငယ်ရဲ့အဆင့်အထိ adapts သောရောထွေးသင်္ချာ mode ကို Play ။ သငျသညျအမြှောက်သင်ယူနေလျှင်သင်လေ့ကျင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်စားပွဲရွေးချယ်နိုင်သည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစားမိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများရှာတှေ့နိုငျတဲ့အစီရင်ခံစာကတ်ပုဒ်မပါဝင်သည်။
- စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ပညာရေး, ဂျနီဖာ DiBrienza အတွက်ပါရဂူဘွဲ့နှင့် တွဲဖက်. တီထွင် -
အစောပိုင်းမူလတန်းပညာရေးနှင့်ဟောင်းတဦးက NYC အများပြည်သူကျောင်းမှဆရာမ
ကလေးများစတုတ္ထအဆင့်မှာ Common Core ပြည်နယ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ပိုပြီးအများကြီးမှတဆင့်သူငယ်တန်းအပေါ်အခြေခံပြီးအောက်ပါသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူပါလိမ့်မယ်:
အပိုဆောင်း & နုတ်:
- Add နှင့် 10, 20, 100, 1000 နှင့်ပိုပြီးအထိနုတ်
- လေးဂဏန်းနံပါတ်များကိုမှတက် Add
- Multi-ဂဏန်းတပြင်လုံးကိုနံပါတ်များကို Add နှင့်နုတ်
အကွိမျမြားစှာ & DIVISION:
- အလေ့အကျင့်ကြိမ်စားပွဲ 1 မှ 12
- 100 အားဖြင့်များပြားခြင်းနှင့်သွေးခွဲ
- 10 အားဖြင့်မြေတပြင်လုံးနံပါတ်များကိုများပြား
တိုင်းတာခြင်း / ဂျီသြမေတြီ:
- တစ်ဦးအညီအမျှ space numberline အပေါ်တပြင်လုံးကိုအရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြု
မိဘအစီရင်ခံစာ: မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာကတ်ပုဒ်မပါဝင်သည်။
Commons ဓိကစံ: K.OA, 1.OA.6, 1.NBT.4-5, 2.OA.2-3, 2.NBT.5-6, 2.NBT.8, 2.MD.6, 3.OA.7, 3.NBT.2-3, 3.MD.5, 4.NBT.4-5
အကြောင်း duck duck Moose
(Khan Academy ၏တစ်ဦးကလုံးလုံးပိုင်လုပ်ငန်းခွဲ)
duck duck Moose, မိသားစုများအတွက်ပညာရေးမိုဘိုင်း apps တစ်ခုဆုရဖန်တီးသူ, အင်ဂျင်နီယာများ, အနုပညာရှင်များ, ဒီဇိုင်နာများနှင့်ပညာတတ်များတစ်ဦးအသည်းအသန်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီ 21 ထိပ်တန်းအရောင်းရဆုံးခေါင်းစဉ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံး Pick App ကိုဆုပေးပွဲနှင့်, မှာ "အကောင်းဆုံးကလေးများ App ကို" တစ် KAPi ဆု '' ကလေးတွေကနှင့်အတူရွေးချယ်မှုဆု, 21 ကလေးများနည်းပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆုပေးပွဲ, 18 Tech မှ '' 12 မိဘများလက်ခံရရှိခဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Consumer Electronics Show ကို။
Khan Academy ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သူမဆိုများအတွက်အခမဲ့, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးများကိုတစ်မစ်ရှင်နဲ့အကျိုးအမြတ်မယူသည်။ duck duck Moose ယခု Khan Academy မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး Khan Academy ဟာယပူဇော်သက္ကာကဲ့သို့, အားလုံး Duck Duck Moose apps များကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ် subscriptions ကိုမပါဘဲ, ယခုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အလှူရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အားကိုး။ www.duckduckmoose.com/about မှာယနေ့ပါဝင်ပတ်သက် Get ။
ကောလိပ်ကျောင်းမှတစ်ဆင့်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးမူလတန်းကျောင်းများအတွက်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့ Khan ကအကယ်ဒမီ app ကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်! www.duckduckmoose.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် support@duckduckmoose.com မှာကိုလိုင်း drop ။
Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်ဂရပ်ဖစ် updates များကို။
Duck Duck Moose အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစား
22.95 ကို MB
Zapzapmath ကျောင်း ...